२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प गएको आज ५ वर्ष पुगेको छ । भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त संरचनाको निर्माण गर्ने र भूकम्पबाट विस्थापित भएका परिवारको पुनर्वास तथा स्थानान्तरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले सोही वर्षको पुस १० गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्‍यो । प्राधिकरणको समयावधि आगामी पुसमा सकिँदै छ । पाँच वर्षको अवधिमा पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा के–कति उपलब्धि हासिल भए ? साप्ताहिकका कृष्ण आचार्यले प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीसँग पुनर्निर्माणका उपलब्धि, कोभिड–१९ का कारण काममा परेको प्रभावलगायत विषयमा गरेको कुराकानी:
पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएको चार वर्ष चार महिना भयो । यो अवधिमा तपाईंहरूका खास उपलब्धि के–के हुन् ?
निजी आवासतर्फ पहिलो किस्ता लिएका ७ लाख ७६ हजार ९ सय ५३ जनामध्ये ६ लाख ८४ हजार १ सय ८९ जनाले निर्माण कार्य गरिसकेको अवस्था छ । यो भनेको ८८ प्रतिशत उपलब्धि हो । यसमध्ये पनि ७२ प्रतिशतले तेस्रो किस्ता रकमसमेत लिइसक्नु भएको छ । ८३ प्रतिशतले दोस्रो किस्ता रकम प्राप्त गर्नुभएको छ । यो अवस्थालाई हेर्दा हामी ९० प्रतिशतको हाराहारीमा प्रगतितर्फ अघि बढिरहेका छौँ । पैसा लिएर गएको र सम्झौता गरिसकेको अवस्थामा अन्यन्त्र घर भएकाहरूको हकमा समस्या केही छ । केहीले कानुनत: नमिल्ने भएकाले हामी घर निर्माण गर्दैनौँसमेत भन्नुभएको छ । हामीले पुनर्निर्माणको कार्यमा समस्या परेका तथ्यांकहरू केलाएर हेर्न थालिसकेका छौं । यस्तो तथ्यांक केलाउने काम ५ प्रतिशतमात्र बाँकी छ । यस हिसाबले हेर्दा निजी आवासको काम हामीले लगभग सम्पन्न गर्ने लागेका छौंभन्दा हुन्छ ।
धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा निर्माण कार्यमा भने खासै प्रगति भएको देखिँदैन नि ?
काठमाडौं उपत्यकामा रहेका विशेष सम्पदाको पुनर्निर्माणको काम सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । हामीले हालसम्म ६० प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेका छौं । बाँकी काम भइरहेको छ । विश्व सम्पदा क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने ९१ प्रतिशत प्रगति भइसकेको छ । भ्रमण वर्षलाई मध्यनजर गर्दै हामीले यस्ता क्षेत्रको कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएका थियौं । समग्रमा काठमाडौं उपत्यका र बाहिरको कुरा गर्दा ९ सय २० सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा हामीले ४ सय २३ सम्पदाको पुनर्निर्माण गरिसकेका छौं । बाँकी काम भइरहेको छ । कामले गति लिइरहेको अवस्थामा लकडाउनका कारण समस्या उत्पन्न भएको छ ।
केही समयअघि बृहत् टुँडिखेल पार्क निर्माणको मास्टरप्लान सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । त्यसमा काम थालिसक्नुभएको छ कि योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ ?
रत्नपार्क, खुलामञ्च र टुँडिखेललाई एकीकृत आयोजनाको स्वरूपमा लैजाने योजना अगाडि सारेका थियौं । रानीपोखरी पुनर्निर्माणको काम पनि यसको एउटा हिस्सा हो । रानीपोखरी पुनर्निर्माण गरिसकेपछि त्रिचन्द्र कलेजलाई स्थान्तरण गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । आजको दिन रानीपोखरीको उद्घाटन गर्ने र एकीकृत आयोजनाको सुरुवात गर्ने हाम्रो योजना थियो । सोहीअनुसार रानीपोखरी निर्माण कार्य द्रुत गतिमा भइरहेको थियो । तर, कोरोना संक्रमणका कारण हाम्रो योजनामा धक्का लागेको छ । संक्रमणका कारण हाम्रो अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावलाई हेरर नै अब सरकारले बृहत् योजनाबारे निर्णय लिन्छजस्तो मलाई लाग्छ । स्रोत–साधन उपलब्ध भएको खण्डमा भने हामी काम अगाडि बढाउन सक्छौं । हामीले अगाडि सारेका कामहरू प्राधिकरण नहुँदाको अवस्थामा पनि सरकारका सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्नेछौं ।
स्थानीय तहले लाभग्राहीको झुटो विवरण दिएका र भूकम्पबाट पीडित नभएकाले पनि राहत लिएका खबर पनि आएका थिए । यो समस्याको समाधान कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहले पठाएको विवरणमा पनि हामीले छानबिन गरेका छौं । १ लाख ८९ हजार गुनासो दर्ता भएकोमा २० हजारलाई मात्र लाभग्राहीको सूचीमा समावेश गरेका छौं । त्यस्तालाई हामीले पीडितको सूचीबाट हटाइसकेका छौं । अहिले त्यस्तो समस्या छैन । कसैले त्यस्तो गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ । पैसा लगेर घर नबनाउनेहरूको खण्डमा उसुल–उपर गरिनेछ । पैसा फिर्ता नगरेको अवस्थामा उसलाई सरकारीस्तरबाट प्राप्त हुने सेवा–सुविधाबाट बञ्चित गराइने छ । यदि कोही पीडित नै छुटेको रहेछ भने त्यस्तालाई प्राधिकरणले न्याय गर्छ ।
पटक–पटक प्राधिकरणको कामकारबाहीलाई लिएर गुनासा सुनिने गर्छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी आलोचना हुने गरेको विषय भनेको पुनर्निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती हो । ढिलासुस्ती हुनुको खास कारण के थियो ?
हामीले स्थानीय तहलाई विश्वास गरेर जिम्मेवारी दियौं तर, कतिपय ठाउँमा राजनीतिक दबाबले गर्दा जनप्रतिनिधिहरूले जथाभावी सिफारिस गरेको पाइयो । भौगोलिक विकटताका कारण केही पीडितहरू छुटेको वा त्यहाँसम्म निर्माण सामग्री पुर्‍याउन समस्या आएको पाइयो । सबै ठाउँमा सूचना प्रविधि र इन्टरनेटको पहुँच नहुँदा तथ्यांक एकीकृत गर्ने कामलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन । घर निर्माण कार्य सुरु गर्न निर्माणकर्मी नै नपाउने समस्या पनि आइपर्‍यो । युवाहरूको ठूलो जमात विदेश गएका कारण स्थानीयस्तरमा दिदी–बहिनीहरूलाई तालिम दिएर काम लगाउनुपर्ने अवस्था आयो । कतिपय अवस्थामा बजेटकै हिसाबले पनि हामीलाई समस्याहरू आइपर्‍यो । हामी बढी निजी आवासमा केन्द्रित हुनुपर्‍यो । शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणका लागि समयमै आवश्यक बजेट उपलब्ध नभएका कारण यसले केही समय लियो । यदि समयमै स्रोत, साधनको व्यवस्थापन भएको भए हामीले अहिलेसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्ने थियौं ।
कोभिड–१९ महामारीका कारण निर्माण कार्यमा कस्तो प्रभाव परेको छ ?
आर्थिक वर्षको चैत, वैशाख र जेठलाई संरचना निर्माणको अन्यत्न राम्रो सिजनको रूपमा लिइन्छ । यो समयावधिमा हामीले निर्माण कार्य भइरहेका संरचना सम्पन्न गर्ने र नभएकाको काम सुरु गरेर मंसिरसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका थियौं । तर, कोरोना महामारीका कारण हाम्रो सबै काम प्रभावित हुन पुग्यो । जनताको जीवनरक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता भएकाले हामीले मजदुरलाई पनि काममा लगाइएको छैन । अब संक्रमणको भय सामान्य भएपछि मात्र काम अगाडि बढ्ने अवस्था छ ।
धरहरा निर्माण कार्य अहिले पनि भइरहेको हो ?
अहिले सानो संख्यामा (१२–१५ जना) मजदुरहरू त्यहाँ सुरक्षित साथ बस्नुभएको छ । उहाँहरूले निर्माणस्थलको सरसफाइ र सुरक्षाको काम गरिरहनुभएको छ । भग्नावशेष हटाउने पनि गरिहरनुभएको छ । धरहरा ठड्याउने जुन मुख्य काम हो, त्यो भने रोकिएको छ ।
देशभरि प्राधिकरण मातहतमा काम गर्ने हजारौं इन्जिनियर, प्राविधिक र मजदुर छन् । यो परिस्थितिमा उनीहरूमा परेको समस्या, उनीहरूका गुनासा र अठ्याराहरूलाई बुझ्ने र सहयोग गर्ने काम कसरी गर्नुभएको छ ?
जिल्ला तहमा रहेका हाम्रा निकायहरूलाई यसका लागि हामीले निर्देशन दिएका छौं । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्लामा संयन्त्र बनेकाले त्यसकै मातहतमा यस्ता कामहरू भइरहेका छन् । त्यसैले सम्बन्धित जिल्ला कार्यालयले समन्वय गरेर उहाँहरूका लागि के–कस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो कार्य भइरहेको छ । यदि कुनै जटिल समस्या परेको खण्डमा जिल्लासँग समन्वयम गरेर हामीले नै त्यस्ता समस्याको समाधानका लागि पहल गर्नेछौं । हामीलाई जानकारीमा आएअनुसार धेरै कर्मचारी तथा मजदुरहरू अहिले आ–आफ्नो घरमा जानुभएको छ । घर नगएका मजदुरहरूको हकमा जुन संरचना निर्माणमा उहाँहरूले काम गरिरहनुभएको छ त्यससँग सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई यथास्थानमा खाने र बस्ने व्यवस्था मिलाउन र यदि कुनै समस्या आएमा स्थानीय तहसँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरेका छौं । मजदुरहरूले निर्माण व्यवसायी र घरधनीहरूसँग जोडिएर काम गर्ने भएकाले उहाँहरू सिधै हाम्रो सम्पर्कमा भने हुनुहुन्न ।
मंसिरसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएका काम समयमै सम्पन्न होलान् त ?
कोरोना संक्रमणको अवस्था कहिलेसम्म जान्छ र त्यसले कुन अवस्था सिर्जना गर्छ भन्ने आँकलन गर्न अझै गाह्रो छ । मजदुरहरू घर जानुभएको छ । संक्रमणको त्रास अन्त्य र सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म उहाँहरू फर्किएर आउने सम्भावना छैन । संक्रमणको अवस्था कस्तो हुन्छ त्यसको आधारमा मात्र हामी यसबारे थप भन्न सक्छौं । यदि तत्काल अवस्था समान्य भएको खण्डमा समयमै सम्पन्न गर्न पनि सकिएला ।
यो परिस्थिति लम्बिए प्राधिकरणको समयावधि थप गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ?
पछिल्लो समयमा देशमा जस्तो परिस्थिति आइपरेको छ, यसले गर्दा समय थप गर्नुपर्ने आवश्यकता देखापरेको छ । तर, यो विषयमा आँकलन र निर्णय गर्न अहिले नै हतार हुन्छजस्तो मलाई लाग्छ ।
पाँचौं भूकम्प स्मृति दिवसकै बेला भूकम्पपीडितहरूले फेरि अर्को महामारी झेलिरहेका छन् । भूकम्पपीडितहरूलाई तपाईं के भन्न चाहनुहुन्छ ?
भूकम्पको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइनसक्दै अर्को विपद् आइपरेको छ । भूकम्पको समयमा विपद्को सामना गर्न सक्ने क्षमता जनतामा जसरी देखियो अहिलेको विपद्मा पनि त्यही ऊर्जा देखाउन आवश्यक छ । त्यो भनेको अहिलेको अवस्थामा लकडाउनमै बस्ने हो । भोलि अवस्था सामान्य भइसकेपछि हामी फेरि पुनर्निर्माण कार्यमा जुट्नेछौं । सबै नेपालीको साथ–सहयोगको अपेक्षासहित सबैको सुस्वास्थ्यको कामना ।